Ifulethi, i-Platte, i-SD - I-Airbnb
Ifulethi, i-Platte, i-SD
Platte, South Dakota, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Donna
Ifulethi Ifulethi liyifulethi eligcwele - igumbi lokuphumula, ikhishi, indlu yokugezela, ikamelo lokulala elilodwa elikhulu w/imibhede emibili emikhulu, umbhede olala umuntu oyedwa uyatholakala futhi. Ikhishi elinesitofu/i-microwave/ifriji/i-freezer, umshini wokwenza ikhofi, i-toaster kanye nezinye izinto zokuhlobisa. Izivakashi zingalungiselela ukudla kwazo. Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. I-WiFi, umshini wokuwasha/wokomisa, ithelevishini ye-cable, indawo yokupaka engaphandle
komgwaqo. Ngenxa ye-coronavirus, sithatha izinyathelo ezengeziwe zokuhlanza nokuhlanza nge-sanitizer izindawo ezivame ukuthintwa phakathi nokubhukha.
Leli fulethi lisezingeni eliphansi le-Molly 's Manor B&B. Ezinye izivakashi zingase zibe sendlini ngesikhathi sokubhukha kwakho. Amakamelo ezivakashi e-B&B atholakala esitezi sesibili sendlu yasekuqaleni neyomlando. Ifulethi lilungele abantu abahlukahlukene abeza endaweni, kungakhathaliseki ukuthi bazingela ama-pheasants, inhlanzi eMfuleni omuhle wase-Missouri noma bachithe izinsuku ezimbalwa nomndeni nabangane emicimbini ehlukahlukene - imishado, ukuthweswa iziqu, ukuhlangana kabusha, imingcwabo, njll. Leli kamelo lefulethi liyindawo ekahle kakhulu yabantu abaya e-Platte ngezizathu zebhizinisi - Izivakashi ezihlala lapha ziyakujabulela ukuhlanzeka, amakamelo avulekile nokukhetha ukulungiselela ukudla kwazo...kungaba ekhishini lazo langasese noma zisebenzise i-grill etholakala kuvulande wesivakashi. Isidlo sasekuseni singanikezwa ngemali eyengeziwe - sicela uthintane nomnikazi uma lokho kukukhanga. Uma ufuna indawo yokuhlala ubusuku obubodwa nje, noma ukuhlala isikhathi eside e-Platte - yilokhu. Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, indawo yokupaka eyanele engekho emgwaqweni. Leli yifulethi elisha - belihlezi lingenawo umusi futhi lingenawo umusi. Ukubhukha kwesikhathi eside nesikhashana kuyatholakala.
Ifulethi Lase-Molly 's Manor liphakathi ne-Plte. Vele uvimbele esitolo sokudla, izitolo ezilula, ishashalazi lebhayisikobho ne-Main Street. Izindawo zokudlela nezinye izitolo ezitholakala ebangeni elingahanjwa ngezinyawo, noma ngemizuzu engu-5 uma uhamba ngemoto. Umfula omuhle wase-Missouri uhamba ngemizuzu engu-15 kuphela ngemoto ukusuka e-Fulethi Suite.
Hlola ezinye izinketho ezise- Platte namaphethelo